रुकुमकोट घुम्न किन जाने ? - AahaSanchar
Home आहा बिचार रुकुमकोट घुम्न किन जाने ?
नेपालको नया संरचना अनुसार प्रदेश नम्बर पाचमा पर्ने रुकुमकोट जिल्लाको सदरमुकाम र सिस्ने गाउपालिकाको केन्द्र रहेको एक पर्यटकिय सम्भावना बोकेको पुरानो सुन्दर उपत्यका हो । यो ठाँउको पुरानो नाम सर्पकोट, बाहुन्ठाना, शोभा, रुकुमकोट हुँदै अहिले सिस्ने गाउपालिका अन्तर्गत पर्दछ । बाहुन्न पोखरी त्रिपन्न टाकुरीको नामले चिनिने यहाको पृथक महत्व रहि आएको छ । २०३० सालसम्ममा पुरानो रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम थियो । नेपालको प्रशासनिक भूगोलको फेरबदल सँगै वि.स. २०१८ सालमा नेपाललाई चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्ला बनाउने क्रममा रुकुम जिल्लाको नामाकरण गरियो जुन रुकुमकोटको नामबाट नै “कोट“ हटाएर रुकुम जिल्लाको नाम रहन गएको हो । २०१८ साल वैशाख १ गते सल्यान र जाजरकोटबाट छुट्टै जिल्लाका रूपमा कायम भएको रुकुमको पहिलो सदरमुकाम रुकुमको पूर्वी क्षेत्रको रुकुमकोटमा भयो । २०३० वैशाख २ गते रुकुमकोटबाट मुसीकोट सदरमुकाममा स्थान्तरण भए पछि फेरि २०३० सालमा गुमाएको सदरमुकाम नयाँ संघीय सरचना अनुसार रुकुम जिल्ला लाई २ जिल्लामा बिभाजन गर्ने क्रममा नयाँ जिल्लाको रुपमा २०७४ मा पुर्वी रुकुम जिल्लाको जन्म भइ पुस्न पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटममा तोकियो ।
रुकुमकोट प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी त छदै छ भौगलिक, ऐकिहासिक, सास्कृतिक एंव पर्यटकिय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण रुकुमकोट पुग्दा जो कोहिको मन चंगा हुन्छ । कुनै समय मगर राजा, बोक्से राजा भन्ने भोटे राजाले राज्य गरेको स्थान हो रुकुमकोट जहा रमेर बस्न पाउनु जो कोहिको लागि पनि अहोभाग्यो हो । ससाना पहाडले सजिएको भौगलिक संरचना सानो भेरी नदी रुमगाडको संगम स्थल र धाउने बगरको फाटबाट माथि उठेको सुन्दर उपत्यका रहेको छ । प्राकृतिक जलाशय अलौकिक कमलका फूलहरुले कमलदह भएको रुकुमकोट ऐतिहासिक अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । शौन्दर्यताको आकर्षण प्राकृतिक भूवनोट सन्तुलित हावा पानीको वातावरणले रुकुमकोट पुग्नेहरु प्रकृति संग रमाउँछन । रुकुमकोटलाई वरिपरी सर्प झै डाडाले घेरेको छ । त्यसैले पहिले रुकुमकोटको नाम सर्पकोट थियो । रुकुमकोट बजार र आसपासका डाडा काडा बाट मनोमोहक दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । नाकपुजा डाडामा रहेको भ्युटावरबाट चढेर तरेली परेका पहाडहरु देख्दा तपाइलाई जति फोटा खिच्दा पनि मन अघाउदैन । यहा विभिन्न जातजाति,भाषा संस्कृतिका मानिसहरु बस्ती रहेकोले पनि पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यहाका कला संस्कृतिहरु आफ्नै किसिम किसिमका छन प्राय यहाका नाचहरु सामूहिक हुन्छन अगुवालाई पछ्याएर नाच्नु यहाको नाचको विशेषता हो । सिंगारु नाच यहाको एउटा सांस्कृतिक गहना हो । धार्मिक हिसाबले पनि यहाका बासिन्दाहरुको आस्था र विश्वास उत्तिकै छ रुकुमकोटमा मात्रै एक दर्जन भन्दा बढि मठ मन्दिरहरु छन । त्यसैले मन्दिरै मन्दिर भएको रुकुमकोट पनि भन्ने गरिन्छ यहा एक पटक धार्मिक महत्सव र दुइ पटक पर्यटन सांस्कृतिक महत्सव पनि गरिएको थियो । मध्य पहाडी लोक मार्गले रुकुमकोट लाई थप सुविधा दिएको छ रुकमकोट बाट सिधै केन्द्रिय राजधानी काठमाडौं जान सकिन्छ भने पोखरा बाग्लुंग हुदै रुकुमकोट पुग्न सकिन्छ । दश वर्षे जनयुद्धको उदगम स्थल मानिने रुकुम रुकुमकोट पनि अछुतो रहने कुरै भएन पछिल्लो समय युद्ध पर्यटन र गुरिल्ला पदयात्रा मार्गले पर्यटन क्षेत्रमा थप आकर्षण थपेको छ । जिल्लामा भएका ऐतिहासिक,सांस्कृतिक र भौगलिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण पर्यटकिय संभावना बोकेका स्थानहरुको पहिचान गरी पछिल्लो समय ग्रामिण पर्यटन क्षेत्रमा पनि विकास हुन थालेको छ । पर्यटकहरुका लागि खान र बस्नको लागि सोच्नु पर्ने समस्या छैन स्थानिय स्तरमा उत्पादित लोकल खान र बस्नको व्यवस्थाका साथै होमस्टे प्रश्स्त मात्रामा होटेलहरु पनि छन । जिल्लामा हिमाल, हिमताल, पोखरी प्रशस्त छन् । यसका साथै बहुमूल्य जडीबुटी यार्चा पाइने बुकी,मगर संस्कृति यही जिल्लामा पर्छ । सिस्ने हिमाल, कमल दह,देउराली गुफा, ब्रहाजि मन्दिर ,शिवालाय मन्दिर,सप्तऋषि धारा, तातोपानी,सानीभेरी नदी,कोटमा रहेको बोक्सेजार,झुम्कामारेमा रहेको सहिद पार्क ठाटी डाडामा रहेको सहिद स्तम्भ एक पटक हेर्नै पर्ने यही गाउ पालिका अन्तर्गत पर्दछन ।
कमल ताल स् मध्यपहाडी लोक मार्गको छेउमै रहेको यो ताल पौराणिक कथा अनुसार कुटुम्बुरीको धार्मिक आस्थाले प्रसिद्ध तालको पानि सफा र निलो छ । कतै मुहान पनि नदेखिने तर पानि पनि नघटने यो तालको अनौठो विशेषता हो । उत्तर र दक्षिण फैलिएको ताल नेपालको नक्सा आकारको छ । तालमा फन्को मार्न २५मिनेट जति लाग्छ । मौसम अनुसार फरक फरक दृश्यावलोकन गर्न सकिने ताल झन्डै समुद्रि सतह देखि १ हजार ५ सय ८१ मिटर उचाइमा छ । यसको गहिराइ औसतमा ३५ मिटर छ । तिन किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण यो तालमा जेठ देखि कात्तिक सम्म झपक्क कमल फुलले ढाकेको हुन्छ भने फागुन महिनाबाट कमलको जरा निकाल्न सुरु गरिन्छ । बाह्रै महिना रुकुमकोटका घरमा पाइने कमलको जराको चाना फागुन देखि भने काचो पाइन्छ । आयुर्वेदमा कमलको जरा पिसाब,दम,जन्डिस,कमलपित्त लगाएतका रोगहरुको औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तालमा नुहाएर विभिन्न रोगहरु सन्चो हुने जनविश्वास छ । तालले दिनभर फरक फरक रंग फेर्ने गरेको देख्न पाइन्छ । यस तालमा करिब ४०जातका जल चराहरुले डुबुल्की मारेको देख्न सकिन्छ । जाडो समयमा अन्ट्राटिका लगाएत देशबाट तालमा घुमन्ते चराहरु पनि आउने गर्दछन । तालकै तालको छेउमै रहेको ब्राहाजिको मन्दिरले पनि पर्यटकहरुलाई थप आकर्षित बनाएको छ । शिवरात्रि,चैते दशै,हरितालिका तीज र बडा दशैमा ताल क्षैत्रमा मेला लाग्ने गर्दछ।ताल लाई थप आकर्षक बनाउँन दहको पश्चिम क्षेत्रमा बगैंचा सहित पाहुना घर लगाएतका संरचना निर्माणाधिन छन । साहसिक खेल ट्रायोथलन पनि यहा‘ खल्ने गरिन्छ ।यो ताललाई नेपाल पर्यटन बोर्डले गन्तव्यको सूचीमा राखेको छ ।
सिस्ने हिमाल ः यो हिमाल गाउपालिकाको केन्द्र रुकुमकोट बाट अलीकति टाढा पर्दछ गाउपालिकाको नाम नै यसै हिमालको नाम बाट राखिएको छ । यसलाई स्थानिय भाषामा मुर्कुट्टा हिमाल पनि भन्ने गरिन्छ । यो हिमाल पूर्वी रुकुमको उत्तरी सिमानामा अवस्थित छ यसको उचाई पाच हजार आठ सय ४९मिटर अग्लो रहेको छ । यो नै पाच नम्बर प्रदेशको अग्लो हिमाल हो भन्ने हरु पनि छन प्रदेश नम्बर पाचको प्रदेशको लोगोनै सिस्ने हिमालको नामबाट राखिएले पर्यटकिय क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने स्थानियको भनाइ छ । रुकुमकोट नाकपुजा डाडामा रहेको भ्युटावर,खोर्सले डाडाहरु बाट सिस्ने हिमालको फोटो खिच्न र हेर्न सकिन्छ यहा बाह्रै महिना सेताम्मे हिउँ हुन्छ ।
देउराली गुफा ः यो गुफा रुकुमकोट देखि पूर्बमा रुमगाड नदि (लुकुम गाड)को किनारमा अवस्थित छ । सांघुरो प्रवेशद्वारबाट भित्र पस्यो भने बिशाल भवन भित्र प्रवेश गरेको अनुभव हुन्छ । गुफा भित्र प्राकृतिक रूपमा बनेका मानिसका बिभिन्न दैनिक क्रियाकलाप ,बिभिन्न देवि देवताका मूर्तिहरू हेर्न सकिन्छ,प्राकृतिक रूपमा बनेका यि मुर्तिहरू कसरी बनेका होलान एउटा अनौठो अनुभव हुन्छ । यो गुफा भित्र ९ भन्दाबढि तलाहरू भएको र अनुशन्धानको कमिले गर्दा अहिले २ तला सम्म अवलोकन गर्न सकिन्छ रुकुमकोट बाट यहा‘ जान पैदल ४० मिनेट र मध्य पहाडी लोकमार्ग हुदै सवारी साधन बाट १५ मिनेट मात्रै पदल हिडेर पुग्न सकिन्छ । गुफामा रुने अवस्थामा पानी चुने गर्दछ । त्यसलाई चुनपानी भनिन्छ ।गुफामा रोएर विभिन्न आकृतिहरु बनेका छन दुई तला सम्म हेर्न सकिने गुफा तल्लो तलामा देवी देवताका मूर्तीका आकृतिहरु छन । शिव लिंग पार्वती,गाईका थुन,हात्तीका खुट्टा,केराका कोसा लगाएतका धेरै आकृतिहरु देख्न सकिन्छ भने माथिल्लो तलामा रहेका सेता रंगका बच्चा बोकेका,ढिकी कुटन लागेका जा‘तो पिस्न लागेका,खान पकाउन लागेका जस्ता विभिन्न आकृतिहरुले यो गुफामा पुग्ने जो कोहि पनि आश्चर्यमा पर्दछन । गुफा भित्र भालुको मुख छ त्यसमा टाउको राखेपछि लामो कपाल आउने जनविश्वास रहि आएको छ । रुमगाडको नजिकैमा रहेको यो गुफामा देउराली नामकी एक महिला त्यस क्षेत्रमा बस्थिन।उनकै नाम बाट देउराली रहन गएको किंवदन्ती रहेको छ । प्रत्येक नया बर्षमा यहा मेला पनि लाग्ने गर्दछ ।
ब्रहाजिको मन्दिर ः यो मन्दिर एउटा नेपालकै पुरानो एतिहासिक मन्दिरहरू मध्ये एकको रूपमा लिन सकिन्छ । यो मन्दिरको इतिहासको बारेमा अझैपनि कुनैपनि खोजमूलक कार्य हुन सकिरहेको छैन। स्थानिय बुद्दिजिविहरूका अनुशार यो मन्दिर १६ औं शताब्दि भन्दा पनि पुरानो भनेर भन्ने गरिन्छ तर आधिकरिक पुष्टि हुंनभने बाकि नै छ । यो मन्दिरमा गएर पुजा गरि भाकल गरेमा चिताएको कुरा पुग्ने जनबिश्वास रहदै आएको छ । नजिकै अर्को एउटा शिवालय शिवजिको मन्दिर) पनि छ कमल ताल को उत्तर छेउमा अवस्थित यो मन्दिर राणाकालमा बनाईएको हो। हरेक बर्ष शिवरात्रिको बेला ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । यो मन्दिर राणाकालमा निर्मित मध्यपश्चिममा अवस्थित एउटा ऐतिहासिक नमूना हो पनि भन्ने गरिन्छ ।
सानी भेरी नदी ः धौलागिरि हिमालको दक्षिणमा पर्ने चालिके पहाडलाई मुहान बनाई यो नदी बगेको छ। बाग्लुङको ढोरपाटन हुदै रुकुमको तकसेरा, जाङ्, नायगाड, रुकुमकोट, पोखरा,माछ्मी, गरायला हुदै ठुली भेरी नदी मिलेको छ। रुकुमकोटको धाउनेमा यो नदिले ठूलो बगर बनाएको छ जुन धाउने बगर रुकुमकोटको अर्को आकर्षणको रूपमा रहेको छ। जहाँ बाट राफ्टिनङ् गर्दै ठुली भेरीसम्म पुग्न सकिने सम्भाबना देखिन्छ ।
Previous post महोत्सवको अन्तिम दिन भोली तिन कलाकारको प्रस्तुती हुने
Next post शहिद सप्ताह र राजनीतिक ईमान्दारिता
संघको चुनाबका लागि प्रचारप्रसार तिब्र, रोचक घटनाक्रम